Mudaaharaad looga soo horjeedo colaadda gobolka Cayn oo ka dhacay Badhan & Hadaaftimo, Sanaag. – Radio Daljir
Febraayo 24, 2011 12:00 b 0
Badhan, Feb 24 – Mudaaharaad lagu dhalleeceeyey maamulka Somaliland, loogana soo horjeedo colaadda gobolka Cayn ayaa ka dhacay magaalooyinka Badhan & Hadaaftimo ee gobolka Sanaag.
“Siilaanyo maxaad tidhaahdeen? Ha dhaco.” ayaa ka mid ahaa hadalada dadka mudaaharaaday ay ku dhawaaqayeen.
Maxamuud Siciid Dabayl, guddoomiyaha gobolka Sanaag oo aan ka waraysanay mudaaharaadka ayaa sheegay in shacabka gobolku aanay raali ka ahayn colaadda
Md. Dabayl ayaa sheegay in maamulka Somaliland uu daandaansi iyo dhulbalaarsi isiraysan ka wado gobolka Cayn.
Qaar ka mid ah shacabka banaanbaxayey ayaa sheegay in diyaar la wadaagayaan shacabka gobolka Cayn gulufka colaadeed ee uu wado maamulka M/weyne Siilaanyo.
Mudaaharaadyo la mid ah kuwan ayaa ka socda magaalooyinka kale ee gobollada Puntland sida Bossaso, Garowe & Galkacyo.
Bishii Nofembar ee sannadkii 2010 ayaa waxaa ka bilawday dagaal khasaare xoogan gaystay balliga Kalshaale, kuna fiday Hagoogane & Maygaagle oo ka wada tirsan gobolka Cayn.
C/khadar M. Warsame,
Baahin: [Sabti], [Feb 26], Weriye Sucaad M Maxamed …Duqii magaalada Gaalkacyo oo si kadis ah isu casilay, dalkana uga dhoofay …Barlamaanka Federaalka oo xilli-kordhintooda ku tilmaamay bad-baado shacab …Haweenka Buuhoole oo la hadlay kuwa Hargaysa: Gabadh hooyo noqotay wiil dagaal kuma guugaabiso …Guddoomiyaha gobolka Gedo oo ka hadlay dagaallo ka dhacay gobolkiisa …